छ महिनापछि खुल्यो टीकापुर पार्कः लाग्ला त आन्तरिक पर्यटकको घुइँचो ? « Nepal Bahas
छ महिनापछि खुल्यो टीकापुर पार्कः लाग्ला त आन्तरिक पर्यटकको घुइँचो ?
प्रकाशित मिति : २० आश्विन २०७८, बुधबार १५:५०
२० असोज, भजनी । कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण विगत ६ महिनादेखि बन्द कैलालीकै मुख्य पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा रहेका टीकापुर पार्क खुल्ला गरिएको छ । आन्तरिक पर्यटकका लागि महत्वपूर्ण मानिने टीकापुर पार्कमा वार्षिक लाखौं पर्यटकले अवलोकन गर्दै आएको छ । लामो समयदेखि टीकापुर पार्क खुल्ला गर्नुपर्ने आवाज उठ्दै आए पनि नगरपालिकाले स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर गत भदौ १९ गतेदेखि खुला गरिएको हो ।
कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर सुरु भएपछि गत वैशाखबाट पार्क बन्द भएको थियो । निषेधाज्ञा खुलेसँगै गत भदौ १९ गतेदेखि स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर पर्यटकहरूको अवलोकनका लागि पार्क खुला गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।
विगतमा दशैंतिहारको समय सुरु भएपछि पार्कमा पर्यटक थेग्न गाह्रो हुन्थ्यो”, उनले भने, “यसपछि के हुन्छ थाहा छैन । अहिलेसम्म पर्यटकमा वृद्धि भएको छैन । शनिबारका दिन भने केही बढी पर्यटक आउने गरेका छन् ।” उनले पार्कमा कार्यरत कर्मचारीबाहेक अन्य ४० जना कामदार लगाएर पार्कको सरसफाइ लगायतका काम सम्पन्न भएको उल्लेख गर्दै पार्कको आन्तरिक व्यवस्थापनको बाँकी काम पनि जारी रहेको बताए ।
बर्दियाको राजापुरबाट टीकापुर पार्क अवलोकनका लागि आएका राजेश चौधरीले लामो समयपछि टीकापुर पार्कको अवलोकन गर्न पाउँदा खुसी लागेको बताए । उनले कोरोनाका कारण भएको बन्दाबन्दीले लामो समयसम्म घरभित्र गुम्सिनु परेको बताउँदै पर्यटकीय क्षेत्रहरु खुला भएसँगै घुमघामका लागि सहज भएको बताए।
राजेशले पार्कमा सरसफाइको काम भएको भनिए पनि सरसफाइको काम हुनुपर्ने जति नभएको बताए । “बन्दाबन्दीले पार्कभित्रको सौन्दर्यतामा ह्रास आएको रहेछ । सरसफाइमा नभएको हुँदा होला पहिलेको जस्तो रौनक पार्कमा देखिएन”, चौधरीले भने, “अब चाडपर्व नजिकिएसँगै आन्तरिक पर्यटकहरूको वृद्धि हुने भएकाले पार्कको सरसफाइ अनिवार्य छ । पर्यटकलाई आकर्षण गर्ने गरी नगरपालिकाले काम गर्न सके पार्कबाट ठूलो लाभ लिन सकिनेछ ।”
गत वर्ष मंसिर १९ गतेदेखि टीकापुर पार्क खुला गरिएको थियो । पाँच महिनाको अवधिमा नगरपालिकाले पार्क घुम्न आउने पर्यटकबाट रु २१ लाखभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन गरेको थियो । पूरै महिना पार्क सञ्चालनमा आएको खण्डमा भने ५० लाखभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन हुने गरेको पार्कमा कार्यरत चौधरी बताउँछन् ।